रोचक जानकारी – Page6– MeroJilla.com
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भविष्यवाणीले हलचल,अमेरिकाले पाउँदैछ कान्छो राष्ट्रपति Friday, February 23rd, 2018
वासिंटन । अमेरिकामा एक युवकले सन् २०३० सम्म आफू पुगेको दावी गर्दै त्यतिन्जेल हुने विभिन्न घटनाक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नोह नाम गरेका ती युवक अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा चर्चितसमेत भएका छन् । विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनमा उनको अन्तरवार्ता आउन थालेको छ । यतिमात्र होइन, उनका भनाइलाई अन्तरवार्ताकै क्रममा झुठो पत्ता लगाउने मेसिन (लाइ डिटेक्टर)मार्फत जाँचसमेत..
यौन चाहना पुरा भएन ?कन्ट्रोल गर्ने तरीका……………………………….. Monday, February 19th, 2018
तपाईको जस्तै उमेरमा धेरै साथीहरुलाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्छ । कतिले ब्यक्त गरे होला कतिले गरेनन् होला, अथवा अरु साथीहरुले यौनचाहना भएपछि हस्तमैथुन गरेहोला, वा अरु कुनै तवरले यौन ब्यबस्थापन गरे होला । २० बर्षको उमेरमा स्वभाबिक रुपमा यौन चाहना हुन्छ, यौनसम्पर्क गर्दा कस्तोहोला, यौनसम्पर्क गर्न पाएपनि हुने भन्ने जस्तो चाहना हुनु स्वभाबिक पनि हो । सबै जिज्ञासा र सबै..
हाँसो रोक्न नसकिने अचम्म लाग्दा तस्विर ! Friday, February 9th, 2018
बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा केही यस्ता तस्विर भाइरल हुन्छन्, जसलाई देखेर हाँसो रोक्न कठिन हुन्छ । यस्तै केही तस्विर हामीले कलेक्शन गरेर देखाउँदैछांै । जुन देखेर तपाईलाई पनि हाँसो रोक्न गाह्रो हुनेछ । यी तस्विर समाजिक संञ्जालमा निकै भाइरल भएका थिए । हेर्नुहोस् तस्विर १. यो तस्विर हेर्दा तपाईले भारतीय मिडियाको असलीरुप थाह पाउनुहुनेछ । जब कुनै समचार आइरहेको हुँदैन, तब..
मान्छेको चिउँडो हेरेरै थाहा हुन्छ त को-कति भाग्यमानी ? Monday, February 5th, 2018
खासगरी मानिसलाई सुन्दर बनाउन अनुहारका अंगहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर समुन्द्र शास्त्रका अनुसार अनुहारका अंगहरुको सौन्दर्यजनक मात्र नभएर अरु पनि विभिन्न महत्व छन् । त्यस्तै महत्वपूर्ण अंग हो चिउँडो । मानिसका स्वभाव, गुण अवगुण थाहा पाउन उसको चिउँडो हेरे पुग्ने समुन्द्र शास्त्रको दावी छ । लामो चिउँडोः जुन ब्यक्तिको चिउँडो लाम्चो आकारको हुन्छ त्यस्ता ब्यक्तिमा धेरै गुण..
यसरी लुकाएर राखिएको हुन्छ वाइफाईको पासवर्ड, सजिलै ह्याक गर्ने तरिका सिक्नुहोस… Saturday, February 3rd, 2018
अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन । यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने भयो । प्राय कलेज, सपिङ सेन्टर, सिनेमा हल, तथा होटेलहरुमा वाईफाई खुला रहन्छ । अर्थात् यदि यस्ता ठाउँमा जडित वाईफाईको पासवर्ड पत्ता..
गोप्य अंग ताक्दै ट्याटु, गोप्य अंगका ट्याटु सेक्सी Friday, February 2nd, 2018
काठमाडौं, वसन्तपुरको काठमाडौं इन ट्याटु हाउसमा थोरै मुस्कुराउँदै छिरिन् । ट्याटुकारले सोधे, ‘कहाँ हान्ने?’ अलिकति लज्जाभावसहित उनले आफ्नो हात छातीतिर औँल्याइन् र भनिन्, ‘यहाँ अलरेडी ट्याटु छ, त्यसलाई अर्को ट्याटुले छोप्नुपर्यो ।’ किन छोप्न लागेको ? रिपोर्टिङका क्रममा रहेको संवाददाताले जिज्ञासा राख्यो । उनले हाँसीहाँसी जवाफ फर्काइन्, ‘यहाँ ब्वाइफ्रेन्डको नाम छ । ऊसँग..
घरमा दियो बाल्दा यो दिशामा बाल्नुहोस आयु बढ्छ Tuesday, January 30th, 2018
हिंदू शास्त्रमा दियो बाल्नु निकै शुभ मानिन्छ । यसैले धेरै मानिसहरु आफ्नो घरमा दियो बाल्ने गर्छन् । यसको उज्यालोले दु:ख कस्ट भाग्ने विश्वाश रहेको छ। बेदमा अग्नीलाई भगवान नै मानिएको छ । यसैले हिन्दू धर्ममा कुनै शुभ कार्य गर्नुपुर्ब भगवानको अघी दियो बाल्ने गरिन्छ । दियो बाल्ने धार्मिक र बैज्ञानीक दुबै कारण रहेको पाईन्छ । धार्मिक कारण: दियो/उज्यालो ज्ञानको प्रतिक हो । पूजामा..
हाँडीगाउँका सन्दिप जोशीले आफ्ना बुबालाई मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि अस्पताल लैजानु भयो । अस्पतालमा सुरुमा उहाँले आफ्नै खर्चमा बुबाको मिर्गौलाको डायलासिस गर्नुभयो ।एकदुई पटक आफ्नै खर्चमा उपचार गरेपछि मात्रै उहाँलाई थाहा भयो कि मिर्गौलाको डायलासिस निःशुल्क हुन्छ भन्ने । त्यसपछि उहाँले आफ्नो वडाबाट कागजात बनाई मिर्गौलाको डायलासिस निःशुल्क गराउनुभयो । जोशीलाई मात्रै..
ग्रहण लाग्दा के गर्न हुन्न ? भोलि १५२ वर्षपछि खग्रास चन्द्रग्रहण
काठमाडौँ , १६ माघ । माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन भोलि बुधबार बेलुकी खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । माघ १७ गते बेलुकी ५ बजेर ५५ मिनेटमा चन्द्रमा उदाउने र बेलुकी ६ बजेर ३६ मिनेटमा इशान कोणबाट ग्रहणले छुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणको मध्यकाल ७ बजेर १७ मिनेटमा हुनेछ । आठ बजेर ५७ मिनेटमा पश्चिमबाट ग्रहणको मोक्षकाल हुने अर्थात् ग्रहण सकिने समितिका अध्यक्ष..
तपाईसँग यस्तो बानी छ ? छ भने विस्वासका साथ भन्न सकिन्छ अब किड्नी बिग्रियो Friday, January 26th, 2018
तपाईसँग यस्तो बानी छ ? छ भने विस्वासका साथ भन्न सकिन्छ अब किड्नी बिग्रियो जानेर वा नजानेर हुने हाम्रा दैनिक आदतले पनि किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ । प्रायः मानिसको स्वास्थ्यको चासो रहेको किड्नीमा असर हुुनुमा मानिसको लापरवाही मुख्य जिम्मेवार छन । जुन यस प्रकार छन् १. चिसो सर्दी र चिसोको समस्या भइरहन्छ भने यसप्रति अज्ञानता नदेखाउनुहोस् । चिसोले पोस्ट इन्फेक्टिभ..
पाईलसबाट तल्काल समाधान चाहानुहुन्छ ? Tuesday, January 23rd, 2018
एजेन्सी । पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुने गर्दछ ।यसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा यो हो कि मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या बढ्दा पनि बढ्दैन ।पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो..